Pnpkhabar.com | Popular Nepali News Portal अश्लिल चलचित्र बनाएको आरोपमा नायिका शिल्पा शेट्टिका श्रीमान पक्राउ - Pnpkhabar.com
अश्लिल चलचित्र बनाएको आरोपमा नायिका शिल्पा शेट्टिका श्रीमान पक्राउ
काठमाडाैं : बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका श्रीमान तथा व्यापारी राज कुन्द्रा सोमबार अश्लील फिल्म बनाएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार सोमबार राति कुन्द्रलाई मुम्बई प्रहरीको क्राइम ब्रान्चले प क्राउ गरेको हो ।
गत फेब्रुअरीमै दायर गरिएको एक उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा प्रोनोग्राफीमा राज कुन्द्रा मुख्य आरोपी रहेको प्र हरीले प्रमाण फेला पारेको जनाइएको छ। एनडीटिभीडटकमका अनुसार राज कुन्द्रले एक एपमा अश्लील फिल्म रिलिज गर्ने गरेका थिए। हटसट नामको एक एपमा अश्लील फिल्म रिलिज हुँदै आएको र सो एपको मालिक राज कुन्द्र रहेको प्र हरीले जनाएको छ।
प्रह रीले यो मामिलामा अन्य ४ जनालाई यसअघि नै प क्राउ गरिसेको छ। प्र हरीले कुन्द्रा वि रुद्ध आरोपीहरुको बयानमात्र नभएर टेक्निकल प्रमााणसमेत भएको जनाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार युवतीहरुलाई जबरजस्ती अश्लील फिल्म बनाउन लागएर कुन्द्रले सो एपमार्फत रिलिज गर्ने गरेका थिए। प्र हरीले यो लाखौंको व्यापारिक सञ्जाल हुनसक्ने बताएको छ।
अन्नपूर्ण मिडया नेटवर्कद्वारा गाईजात्रा कमेडी च्यालेन्ज प्रतियोगीता, यस्तो छ नियम !
कस्तो फिल्म बनाउँथे राज कुन्द्रा ? अभिनेत्री गहनाले खोलिन् यस्तो रहस्य